Archive du 20170624
Kianjaben’i Mahamasina Hodidinina mpitandro ny filaminana 1000
Araka ny fanambarana teny amin’ny toby Ankadilalana omaly, dia mahatratra 1000 ireo mpitandro ny filaminana hahetsika mandritra ny fanamarihana ny fetim-pirenena,
Mpanohitra Miady an-trano sahady
Niharihary tetsy amin’ny Live hotel Andavamamba omaly nandritra ilay fivorian’ny mpanohitra ny fitondrana izay nanaovan-dry zareo avy eo anivon’ny vovonana Force de changement, tarihin’ny filohan’ny dinika ho fanavotam-pirenena (DFP),
Fiafaran’ny taom-piasan’ny filoham-pirenena Tsy azo andrasana intsony, hoy Radanoara
Efa mijaly sy noana ny vahoaka Malagasy ka tsy afaka hiandry ny fiafaran’ny taom-piasan’ny filoham-pirenena ankehitriny intsony,
Alain Andriamiseza « 50 taona nahantra ny Malagasy »
Mankasitraka ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM) nanome ohatra tany Toliara, hoy ny mpanao politika miara-dia amin’ny mpanohitra, Alain Andriamiseza.
Matso sy lanonana eny Iavoloha Tsy ho avy ireo filoha 4 ?
Roa andro tsy hahatongavan’ny lanonana ofisialy hanamarihana ny fetim-pirenena ny 26 jona hisian’ny Matso eny Mahamasina sy ny fisakafoanana lehibe eny Iavoloha, dia tsy fantatra mazava ny pitsopitsony.
Depiote Randrianarisoa Stanislas Miara-miasa amin’ny finoana samihafa
Hafakely raha samy fanoloran-javatra nentina nankalazana ny fetin’ny Asaramanitra 2017 no nataon’ny Depiote Randrianarisoa Stanislas voafidy tao amin’ny Boriborintany faharoa eo Antananarivo Renivohitra.
SMM sy Riana Andriamandavy Hifampitady aorian’ny 26 jona
Nangina tanteraka i Riana Andriamandavy VII ary tsikaritra ho misitritsitrika tsy toy ny fanaony intsony amin’izao fotoana izao. Efa manomboka matahotra sy mitady lalan-kivoahana manoloana ny fitorian’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) ve ?
Voagadra tanteraka !
Ao anatin’ny fetim-pirenena tanteraka isika amin’izao fotoana izao, saingy toa anarany fotsiny aloha izany hatreto.
Fitiliana ny aretina homamiadana Nahazo “Gamma Camera” ny Hopitaly Manara-penitra
Tontosa ny tolakandron’ny alakamisy 22 jona 2017 teo ny lanonam-pitokanana ny fitaovam-pitsaboana raitra antsoina hoe “Gamma camera” napetraka eny amin’ny hopitaly manara-penitra eny Andohatapenaka.
Kaominina Ambavahaditokana Fotodrafitrasa 3 sosona no notokanana
Fotodrafitrasa 3 sosona no notokanana tao amin’ny kaominina Ambavahaditokana, distrikan’Antananarivo Atsimondrano omaly, dia ny birao vaovaon’ny fokontany Amboatavo,
LOZA ANA HABAKABAKA
Fiaramanidina kely tsy miankina iray tra-doza omaly maraina 23 jona, ka nianjera teny an-tanimbary tany Marovoay.